एस्थेटिक लेजर, सौन्दर्य मेसिन, मेडिकल लेजर उपकरण - आपूर्तिकर्ता
HIFU एन्टी एजिङ मेसिन
Co2 भिन्नात्मक लेजर मेसिन
Cryolipolysis वजन घटाने मेसिन
EMSlim शरीर मूर्तिकला मेसिन
H2O2 स्पेस अक्सिजन मेसिन
लामो पल्स 1064nm Nd Yag लेजर मेसिन
मल्टिफंक्शन ब्यूटी मेसिन
Q स्विच एनडी याग लेजर मेसिन
आरएफ लिफ्टिङ मेसिन
छाला विश्लेषक प्रणाली
KR लेजर कारखाना
KR LASER मा स्वागत छ
KR लेजर सैलुन, अस्पताल, क्लिनिक ग्राहकहरु को लागी चिकित्सा सौन्दर्य मा एक-स्टप समाधान प्रस्ताव गर्न समर्पित। हामीसँग 808nm डायोड लेजर कपाल हटाउने मेसिनहरू, कूलस्कल्प्टिङ मेसिनहरू, HIFU मेसिनहरू, 980nm डायोड लेजर स्पाइडर नसाहरू हटाउने मेसिनहरू, इन्टेन्स पल्स्ड लाइट (IPL) मेसिनहरू छन्।
हामीसँग हाम्रो आफ्नै अनुसन्धान र विकास विभाग, उच्च दक्षता, विदेशी वितरकहरू र बिक्री पछि विभागको साथ युवा व्यापार टोली छ।
सिफारिस गरिएको उपकरण
तपाईको समस्याको समाधान सधैं हुन्छ!
पिकोसेकेन्ड लेजर मेसिन
पिकोसेकेन्ड लेजर मेसिन Choasma, उमेर स्थान, Nevus को लागि एक स्वस्थ, भरपर्दो सौन्दर्य समाधान हो ...
Q स्विच गरिएको ND YAG ट्याटु हटाउने लेजर मेसिन
Q Switched ND YAG ट्याटु हटाउने लेजर मेसिन Rem को लागि एक स्वस्थ, भरपर्दो सौन्दर्य समाधान हो।
उपचार सिद्धान्त प्रकाशको विस्फोटक प्रभाव, सुपर पिकोसेकेन्ड लेजर र ......
1200W डायोड कपाल हटाउने लेजर मेसिन
1200W डायोड हेयर रिमुभल लेजर मेसिन स्थायी कपालको लागि स्वस्थ, भरपर्दो सौन्दर्य समाधान हो।
डायोड कपाल हटाउने लेजर मेसिन
उपचार सिद्धान्त डायोड लेजर उपकरण 808 nm, 755nm र 1064nm, विशेष गरी ......
थ्री इन वन मल्टीफंक्शन मेसिन
उपचार सिद्धान्त SHR: SHR वा सुपर हेयर रिमुभल एक अपेक्षाकृत नयाँ प्रविधि हो।
मल्टिफंक्शन IPL Nd Yag लेजर मेसिन
उपचार सिद्धान्त मल्टिफंक्शनल वर्कस्टेशन एक व्यापक र कुशल अनुहार हेरचाह हो ......
Co2 Fractional लेजर मेसिन छालाको नवीकरण र पुन: प्राप्तिको लागि स्वस्थ, भरपर्दो सौन्दर्य समाधान हो...
6D Cryolipo लेजर आकार प्रणाली (नोभेम्बर-इनभेसिभ 6D लेजर स्लिमिङ उपकरण)
6D Cryolipo लेजर आकार प्रणाली (Nov-Invasive 6D लेजर स्लिमिङ उपकरण) एक स्वस्थ, भरपर्दो छ...
उच्च तीव्रता विद्युत चुम्बकीय मांसपेशी शरीर मूर्तिकला बोसो जलाउने मांसपेशी निर्माण मेसिन
उपचार सिद्धान्त Coolsculpting र मांसपेशी प्रशिक्षण CoolSculptinganon-invas......
पोर्टेबल 7D HIFU फोकस गरिएको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन
पोर्टेबल 7D HIFU फोकस गरिएको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन अनुहारको लागि स्वस्थ, भरपर्दो सौन्दर्य समाधान हो।
980nm सर्जिकल डायोड लेजर मेसिन
980nm सर्जिकल डायोड लेजर मेसिन वास्कुलर घावको लागि एक स्वस्थ, भरपर्दो सौन्दर्य समाधान हो।
सुपर पिकोसेकेन्ड Nd YAG लेजर मेसिन
सुपर पिकोसेकेन्ड Nd YAG लेजर मेसिन सबै k हटाउनका लागि स्वस्थ, भरपर्दो सौन्दर्य समाधान हो।
हामी यहाँ छौं तपाईको अभ्यास बढाउनको हरेक चरणमा मद्दत गर्न।
हामी OEM र ODM, प्रशिक्षण, प्राविधिक समर्थन, र मर्मत सेवाहरूको पूर्ण दायरा प्रदान गर्दछौं।
कारखाना प्रत्यक्ष। उत्तम मूल्य समर्थन नीतिले तपाईंलाई अझ बलियो बनाउँछ।
24/7 प्राविधिक सहयोग टोली तपाईंको लागि उत्तम चिकित्सा समाधानहरू बनाउनको लागि समयमै तयार हुनेछ।
हामी सधैं विश्वव्यापी एजेन्टहरु संग व्यापार सहयोग को लागी हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी तपाईंलाई KR LASER परिवारमा हाम्रा सदस्यहरू मध्ये एक हुन आमन्त्रित गर्दछौं।
म प्रत्येक बिरामीलाई उच्च गुणस्तरको हेरचाहको साथ उपचार गर्न खोज्छु, र प्रत्येक उपचारको लागि सुन्दर, प्राकृतिक उपस्थितिको परिणाम हो। KR लेजर उच्च सुरक्षा र प्रभावकारिताका साथ सबै छालाका प्रकारहरूबाट अनावश्यक ट्याटूहरू हटाउनको लागि इष्टतम प्रणाली हो।
मैले Q-switched Nd:YAG प्रणालीको साथ केही समयको लागि ट्याटु हटाउने सुविधा प्रदान गर्दैछु, तर रंगीन ट्याटूहरू भएका बिरामीहरूमा वृद्धि भएको देखेको छु। म यो सुनिश्चित गर्न चाहन्थें कि मेरा बिरामीहरूलाई उत्कृष्ट नतिजाहरू दिइयो, तिनीहरूले प्रस्तुत गरेका मसीका रङहरू फरक पर्दैन, त्यसैले मैले मेरो अभ्यासमा KR लेजर थप्न रोजेको छु। हामीले recalcitrant मसीहरूमा प्रभावशाली प्रतिक्रियाहरू देखेका छौं।
डा. मोस केन
हाम्रो लक्ष्य भनेको हाम्रा सबै बिरामीहरूको लागि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने उपचारहरू गर्नु हो। KR लेजरले हाम्रा धेरै बिरामीहरूलाई प्रभावशाली नतिजाहरू हेर्न मद्दत गरेको छ, र हामी हाम्रा सबै ट्याटु हटाउने उपचारहरूको लागि यो अत्याधुनिक प्रविधि रोज्न पाउँदा धेरै खुसी छौं।
KR लेजर 2008 मा स्थापित भएको थियो। कम्पनी बेइजिङ, चीन मा स्थित छ। यो एक द्रुत-बढ्दो व्यावसायिक निर्माता हो। हामी मुख्य रूपमा मेडिकल लेजर सौन्दर्य उपकरणको डिजाइन र निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं।
No.2 भवन, No.1 यार्ड, No.2 Street, Wuliqiao, Chaoyang जिल्ला, Beijing, China
Huochetou उद्योग पार्क, 12 Oufu Rd। Yanjiao, पूर्वी बेइजिङ, चीन
प्रतिलिपि अधिकार © 2008-2022, सर्वाधिकार सुरक्षित।
यो वेबसाइटले तपाइँको ब्राउजिङ अनुभव सुधार गर्न र हाम्रो मार्केटिङमा मद्दत गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ।
तपाईं यहाँ कुकीहरू हटाउने बारे थप पढ्न सक्नुहुन्छ: गोपनीयता नीति
म यो गोपनीयता नीतिसँग सहमत छु
* चिन्ह लगाइएका वस्तुहरू आवश्यक छन्
यो, तपाईंले यसलाई राम्रोसँग भर्नु भएको थियो, यो आवश्यक छ। यो, तपाईंले यसलाई राम्रोसँग भर्नु भएको थियो, यो आवश्यक छ। यो, तपाईंले यसलाई राम्रोसँग भर्नु भएको थियो, यो आवश्यक छ।
यो, तपाईंले यसलाई राम्रोसँग भर्नु भएको थियो, यो आवश्यक छ।